पप गायिका मडोनाको पिसाब पिइरहेकाे भिडियो भाइरल
पप गायिका मडोनाको एक भिडियो यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । जुन भिडियोमा उनी पिसाब पिइरहेकी छिन् ।
प्रियंका र निककाे लस एन्जल्समा २० मिलियन डलरकाे महल
प्रियंका चोपडा तथा निक जोनासले अमेरिकाको लस एन्जल्समा महँगो घर किनेका छन्।
कन्सर्टमा ढिला गएको भन्दै मडोनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता
अन्तर्राष्ट्रिय स्टार मडोनविरुद्ध एक रिसाएका प्रशंसकले कन्सर्टमा ढिला गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेका छन् । ती व्यक्तिले आर्थिक भरपाइको माग पनि गरेका छन् ।
दशककै उत्कृष्ट आर्टिस्टको अवार्ड गायिका टेलरले पाउने
ब्राड पिटसँग डिभोर्सपछि निकै नै पीडादायक समय बिताए: हलिउड नायिका जोली
हलिउडकी सफल नायिका एन्जेलिना जोलीले पूर्व पति ब्राड पिटसँग डिभोर्सपछि निकै नै पीडादायक समय बिताएको खुलाएकी छिन् । उनले भनेकी छिन्–‘मैले २ बर्ष अध्यारो र गाह्रो समय बिताएकी छु ।
हलिउड अभिनेत्री जेनिफरले राखिन गिनिज बुकमा इन्स्टाग्राम रेकर्ड
हलिउड अभिनेत्री जेनिफर एनिस्टनले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा गरेको डेब्युले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। पहिलो पोस्ट गरेको उनको सन्देश पाँच घण्टा १६ मिनेटमा १० लाख
गायिका जेनिफर लोपेज र साकिरा एकसाथ देखिने भएका छन् । सन् २०२० मा आयोजना हुने सुपर बाउल हाफटाइम सोमा गायिका जेनिफर लोपेज र साकिरा एकसाथ देखिने भएका हुन् । दुवै गायिकाले एकसाथ सांगीतिक प्रस्तुति दिने जानकारी आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत गराएका थिए । एनएफएल, पेप्सी र रक नेसन्सले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्न लागेको सोमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्याति […]
फेरि माइली साइरसले सेयर गरिन् नग्न फोटो
अमेरिकाकी चर्चित गायिका एवं नायिका माइली साइरस पछाडि उनको एउटा तस्बिर छ जुन उनले आफ्नो कुकुर मेरी जेनसँग खिचाएकी छिन् ।
लसएञ्जल्स(एजेन्सी) । यदि तपाई अमेरिकी रियालिटी स्टार किम कार्दाशियनको शो ‘कीप–अप विद कार्दाशियन’ इन्टरनेटमा हेर्दै हुनुहुन्छ या उनका पति कान्ये वेस्टको ट्वीटरमा पुनरागमनको समाचा खोज्दै हुनुहन्छ भने तपाई सचेत हुन आवश्यक छ । अमरीकी टीवी स्टार किमलाई सन् २०१८ को इन्टरनेटमा खोजिने खतरनाक सेलिब्रेटीको रुपमा चित्रण गरिएको छ । साइबर सेक्युरिटी फÞर्म मैकेफीले इन्टरनेटमा खतरनाक […]
जेम्स बोण्डले पायो नयाँ निर्देशक
लसएञ्जल्स(एजेन्सी) । निर्मातासँगको असन्तुष्टिपछि फिल्म ‘जेम्स बोण्ड’को नयाँ सिरिजको निर्देशनबाट हात झिकेका डेनी बोयलको स्थानमा नयाँ निर्देशक केरी जोजी फुकुनागा आएका छन् । फिल्मका निर्माताद्वय माइकल जी विल्सन र बारबरा ब्रोकोलीले फुकुनागाको भर्सटायलिटी र आविस्कारपूर्ण कामले नयाँ फिल्म राम्रो बन्नेमा आशा व्यक्त गरेका छन् । फुकुनागाले पछिल्लो पटक नेटफ्लिक्सको डार्क कमेडी ‘मेनिआक’ निर्देशन गरेका थिए […]
जोङयुनको अन्त्येष्टिमा रोयो विश्व
सोल(एजेन्सी) । २७ वर्षको उमेरमै आत्महत्या गरेका कोरियन सुपरस्टार जोङयुनको भावपूर्ण अन्त्येष्टि गरिएको छ । सिने नामक दक्षिण कोरियाको चर्चित व्याण्डका प्रमुख गायक जोङयुनको वास्तविक नाम किम जोङ ह्युन हो । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनको निधनको खबर सार्वजनिक भएपछि विश्वव्यापी रुपमा छरिएर रहेका के पप समुदायका फ्यानहरुले उनी प्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन् । उनलाई अन्तिम […]
पिटविरुद्ध अदालत पुगिन् जोली
लसएञ्जल्स(एजेन्सी) । अमेरिकी अभिनेता ब्राड पिट र अभिनेत्री एञ्जेलिना जोली सन् २०१६ मा दुई वर्षको विवाह पछि अलग भए । अदालती प्रक्रियाबाट अलग भए पनि सन्तानको कारण देखाउँदै जोलीले ब्राडलाई अदालतको ढोकामा पुनः ल्याई पु¥याएकी छन् । जोलीले सम्बन्धविच्छेदको मुद्धा दायर भएपछि यता पिटले बच्चाको खर्च नदिएको आरोप लगाउँदै अदालतमा अर्को मुद्धा दर्ता गराएकी छन् […]
जेम्स बोण्डलाई ५० मिलियन पाउण्डको प्रस्ताव
लसएञ्जल्स(एजेन्सी) । जेम्स बोन्ड सिरिजको नयाँ फिल्मको घोषणा भइसकेको छ । यो फिल्मको घोषणासँगै नयाँ जेम्स बोण्ड को बन्छन् भन्ने चासो पनि बढेको छ । यो चासोका बीचमा फिल्म निर्माण कम्पनीले जेम्स बोण्डको फ्रेञ्चाइजीका यसअघिका अभिनेता डेनियल क्रेगलाई नै प्रमुख भूमिकामा अभिनय गराउने निर्णय लिसकेको छ ।जेम्स बोन्ड सिरिजको आगामी सिरिजको फिल्म ‘बोन्ड २५’का लागि […]
स्कटल्याण्डकी चर्चित डिजे डेक्सी नेपालमा
स्कटल्याण्डकी चर्चित डिजे डेक्सीले नेपाली युवायुवती नचाउन नेपाल आएकी छिन् । ‘सान मिगेल वेट फेष्ट २०१८’ मा उनले बिभिन्न आकर्षक डिजे प्रस्तुति मार्फत नेपाली युवायुवती नचाउने भएकी हुन् । आज शुक्रबार अर्थात २५ गतेबाट सुरु हुने ‘सान मिगेल वेट फेष्ट २०१८’ कार्यक्रम देशको १० प्रमुख शहरमा आयोजना हुनेछ । जसका लागि उनी बुधबार साँझ नेपाल आइपुगेकी […]
अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ओबामा अब निर्माता बन्ने
एजेन्सी । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा अब निर्माता बन्ने भएका छन्। यसका लागि उनले केही वर्षअघिको एक कन्ट्राक्टमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उनले अनलाइन स्ट्रिमिङ कम्पनी नेटफ्लिक्ससँगको केही वर्ष अघिकै कन्ट्राक्टमा हस्ताक्षर गरेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। उक्त कम्पनीले चलचित्र, डकुमेन्ट्री, टिभी शो निर्माण गर्ने गर्दछ। उक्त कम्पनीले एक बयानमा भनेको छ, हायर ग्राउण्ड प्रोडक्शन जस्तै ओबामाले […]
गोली हानी हत्या गायिकाको कन्सर्टपछि
अमेरिकाको मशहुर गायिका क्रिस्टिना ग्रिमीको गोली हानि हत्या गरिएको छ । शनिबार अमेरिकाको ओरलैन्डमा एक भव्य कन्सर्टमा गीत गाइसकेपछि उनलाई गोली हानिएको हो । २२ बर्षिय उनी कन्सर्टमा परफर्मेन्सपछि फ्यानहरुलाई अटोग्राफ दिइरहेकी थिइन् । त्यसबखत उनलाई एक अपरिचितले अन्धाधुन्ध गोली हानेका थिए । शरिरसहित टाउकोमासमेत गोली लागि गम्भीर भएकी उनलाई तत्कालै अस्पताल पुर्याइए पनि बचाउन […]
अल विदा स्टेफेन हकिङ !
काठमाडाैं- वैज्ञानीक स्टेफेन हकिङको ७६ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । ब्लक होल र रिलेटिभिटिबारे गहिरो अध्ययन गरेका वैज्ञानीक हकिङको ७६ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । सन् १९४२ जनवरी ८ मा इंग्ल्याण्डको अक्फोर्डमा हकिङको जन्म भएको थियो । प्रध्यापक तथा भौतिक शास्त्री स्टेफन हकिङको ७६ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उनको परिवारले विज्ञप्ति निकालेर […]
लसएञ्जल्स(एजेन्सी) । एकसमय हलिउडको सुनौला जोडीका रुपमा अभिनेता ब्राड पिट र अभिनेत्री एञ्जेलिना जोलीलाई लिइन्थ्यो । तर सन् २०१६ मा उनीहरुले सम्बन्धविच्छेद गरेपछि धेरैका लागि त्यो आश्चर्यजनक रह्यो । सम्बन्धविच्छेदको डेढ वर्षको यात्रामा ब्राडको नाम धेरै युवतीहरुसँग जोडिए । उनी पछिल्लोपटक इमिला क्लार्कसँग डेटिङमा रहेको खबर पनि सार्वजनिक भएको थियो । डेटिङकै मामलामा एञ्जेलिनाको नाम […]
नायिका एवं मोडललाई सबै भन्दा छिटो चर्चामा ल्याउने माध्यम बनेको छ न्यूड पोज ।
लियोनार्दोका यि फिल्म, नहेरि उनलाई वुझ्न गाह्रो पर्छ
पछिल्ला केही वर्षदेखि हलिउडका चर्चित नायक लियोनार्दो डीक्याप्रियोको फिल्म
कान फिल्म फेस्टिवलका मुख्य निर्णायक
हलिउड फिल्म फ्रान्चाइज ‘एक्स म्यान’ निर्देशक ब्रायन सिङ्गर तथा निर्माता साइमन किनवर्गले फिल्मका मूख्य अभिनेता ह्यूग ज्याकम्यान बिना असम्भव भएको बताउनुभएको छ ।
पुरुषले गर्दा वा वा मैले गर्दा आलोचना !
यहि साता केन्टुकी कन्सर्टका क्रममा गायिका म्याडोनालाई रक्सीले मातेर पर्फम गरेको आरोप लागेपछि उहाँ तनावमा पर्नुभएको छ ।
’जासचिन्की’ अर्थात ’रक्षक’
सुपरहिरो फिल्मको दब्दबा संसारमा कते हल्लिएको छैन।
बाफ्टा अवार्ड सार्वजनीक
ब्रिटिस एकेडेमी फिल्म अवार्ड (बाफ्टा)ले सन् २०१५ को मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ।
‘फास्ट एण्ड द फ्यूरियस ८’ इतिहास कायम गर्ने बाटोमा
चेज एक्सन फ्रान्चाइज ‘फास्ट एण्ड द फ्यूरियस’ले इतिहास बनाउने भएको छ ।
कार्टुनमा आमा र सन्तान
हलिउड अभिनेत्री एन्जोलिनाका चार सन्तान प्याक्स, जाहारा, साइलो तथा नोक्स पनि हलिउड प्रवेश गर्ने भएका छन् ।
जस्टिनकाे जस्ट लभ
बेबी गायक जस्टिन बिबर सेलेना गोमेजसँगको प्रेम सम्बन्ध टुंग्याएपछि फिरन्ते जस्तै बनेको हल्ला थियो । तर पछिल्लो समय उहाँको नाम अनेक युवतीसँग जोडिन थालेको छ । तर सेलेनासँगको जस्तो घनघोर प्रेममा भने पर्न नसकेका बताईन्छ ।
धुम ४ मा अमिताभ र ऋतिक
मुम्बई /यशराज फिल्मसको ब्यानरमा निर्माण हुादै आएको चलचित्र ‘धुम’ को चौथो श्रृङ्खला निर्माण हुने भएको छ ।
विवाहको औंठी लिलामी गर्दै पामेला
लस एन्जल्स । हलिउड अभिनेत्री पामेला एण्डरसन विवाहमा श्रीमानले लगाईदिएको औठी लिलामी गर्ने तयारीमा छिन् । …
जस्टिनलाई सधै प्रेम गर्छु : सेलेना गोमेज
हलिउड सुन्दरी तथा गायिका सेलेना गोमेजले आफूले सधै नै आफ्ना पूर्व ब्वाइफ्रेन्ड जस्टिन विवरलाई प्रेम गर्ने बताएकी छिन् ।
पामेला एन्डरसनको तस्बिर देखेर धेरैले जिभ्रो टोके
फ्लन्ट म्यागजिनको कभरमा प्रकाशित पामेला एन्डरसनको तस्बिर देखेर धेरैले जिभ्रो टोके । तस्बिरमा ४८ वर्ष नाघेकी यी अभिनेत्रीले एक धर्सो कपडा लगाएकी छैनन् । त्यसो त अंग प्रदर्शनका लागि पहिल्यैदेखि कहलिएकी अभिनेत्री हुन् पामेला । तर यो उमेरमा उनले नग्न फोटोसुट गराउलिन् भन्ने ठानिएको थिएन । प्रकाशित तस्बिरमा पामेलाको शरीरमा तीखा हिल भएको एक जोडी […]
सन्नी लियोनका कारण भारतमा बलात्कार बढेको राखी सावन्तको दाबी –
मुम्बाई – भारतीय अभिनेत्री राखी सावन्त सन्नी लियोनको चर्को विरोधीका रुपमा चिनिन्छन् । उनी कहिले सन्नी लियोनका कारण भारतीय सिनेमामा अन्य नायिकाहरुको स्वस्थ अभिनय बिक्न छाडेको बताउँछिन् त कहिले भारतले पोर्न साइटसँगै सन्नी लियोनमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गर्छिन् । यसपटक राखीले सन्नी लियोनका कारण भारतमा निकै दुर्घटनाहरु मच्चन थालेको बताइन् । उनले भारतीय समाज […]